सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो , जिविसको सार्वजनिक सुनुवाइ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो , जिविसको सार्वजनिक सुनुवाइ
२०७१ असार ३२, बुधबार ०२:३४ गते
भरतपुर । जिल्ला विकास समिति चितवनले यस आर्थिक वर्षमा भए गरेका कामहरुको सम्बन्धमा मंगलबार सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको छ । कार्यक्रममा जिविस चितवनबाट यस आर्थिक वर्षमा भएका कामहरुका बारेमा स्थानीय विकास अधिकारी भरतमणि पाण्डेले जानकारी गराउनु भएको थियो ।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा पाण्डेले जिल्लामा आउने योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सेवाग्राहीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज शर्माले सोही अवसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको वार्षिक आय–व्यय विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा यसअघि जिविसमा सेवा लिन आएका मध्येबाट ५० जना सेवाग्राहीलाई प्रश्नावली तयार पारी जवाफ मागिएको थियो । जसमा अधिकांशले जिविस चितवनको कामप्रति मध्यम सन्तुष्ट रहेको जनाएका थिए ।
कार्यालयबाट पाइएकोे सन्तुष्टि बारेमा २० प्रतिशतले सन्तुष्ट, ७० प्रतिशतले ठीकै र दस प्रतिशतले असन्तुष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ४५ प्रतिशतले कर्मचारीको व्यवहार सन्तोषजनक रहेको बताए पनि ४० प्रतिशतले मध्यम र १५ प्रतिशतले असन्तुष्ट रहेको बताएका थिए । नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएअनुसार तपाइँले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवामा लागेको समयप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा १५ प्रतिशतले सन्तुष्ट, ६५ प्रतिशतले ठीकै र २० प्रतिशतले असन्तुष्ट रहेको बताएका थिए । त्यस्तै जिविसमा सेवा लिन जाँदा अतिरिक्त रकम तिर्न नपरेको ८० प्रतिशतले बताएका छन् । यस संस्थाले दिने सेवाप्रति तपाइँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा ७० प्रतिशतले ठीकै रहेको र २५ प्रतिशतले विश्वस्त रहेको जनाएका छन् ।
६० प्रतिशतले यस कार्यालयमा आउँदा आफै आएको बताएका छन् भने २५ प्रतिशतले मध्यस्थकर्ताको सहयोगमा आएको बताएका छन् । त्यस्तै, एउटै कामका लागि २ पटकभन्दा बढी धाउन परेको ५५ प्रतिशतले जनाएका छन् । १५ प्रतिशतले १ पटक र २५ प्रतिशतले २ पटक धाउन परेको जनाएका छन् ।
कार्यालयको भौतिक अवस्था अति राम्रोमा २० प्रतिशत ठीकैमा ८० प्रतिशतले मत दिएका छन् । कार्यालयमा भएको नागरिक बडापत्रबारे तपाइँलाई जानकारी छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा ४५ प्रतिशतले जानकार रहेको ४० प्रतिशतले आंशिक जानकारी रहेको बताएका छन् भने १० प्रतिशतले कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् ।
त्यस्तै तपाइँको विचारमा उजुरी पेटिकाको उपयोग कुन हदसम्म भएको छ ? भन्ने प्रश्नमा जवाफ दिँदै ५० प्रतिशत जनताले प्रयोग नभएको बताएका छन् भने ४० प्रतिशतले ठीक भएको बताएका छन् । कार्यालयमा सरसफाईको अवस्था ठीकै रहेको सेवाग्राहीले बताएका छन् । झण्डै ९५ प्रतिशतले ठीकै रहेको जवाफ दिएका हुन् ।
६५ प्रतिशत सेवाग्राहीले पटकपटक भनेपछि मात्रै कार्यालयमा सरसफाइ सम्बन्धी गुनासो सुन्ने गरिएको बताएका छन् । त्यस्तै जिविसमार्फत संचालन गरिएका योजनाहरु केकति प्रभावकारी छन् भन्ने जिज्ञासामा ७० प्रतिशतले प्रभावकारी नभएको बताएका छन् । त्यस्तै योजनाको बिल भुक्तानी दिने व्यवस्थामा ५० प्रतिशतले ठीकै रहेको बताए पनि ४० प्रतिशतले निकै गाह्रो रहेको बताएका छन् ।
योजनाहरु जाँचपास गर्दा प्राविधिकहरुलाई रकम दिनुपर्छ ? भन्ने प्रश्नमा ७० प्रतिशतले पर्दैन भनेका छन् भने ५ प्रतिशतले मागेर लिने गरेको र २५ प्रतिशत सेवाग्राहीले रकम नदिए अप्ठ्यारो पार्छन् भन्नेमा मत दिएका छन् । आर्थिक स्रोत कम उपलब्ध रहेको ५५ प्रतिशत सेवाग्राहीले बताएका छन् । ३० प्रतिशतले भने अति कम स्रोत उपलब्ध रहेकोे प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कार्यालयमा भएका कर्मचारीमा सीप कस्तो छ ? भन्ने प्रश्नमा चालिस प्रतिशतले आवश्यक सीप भएको बताएका छन भने ३५ प्रतिशतले आवश्यकता भन्दा कम छ भनेका छन् । जिविसले आम्दानी र खर्च सूचना पाटीमा नटाँसेको ६५ प्रतिशतले बताएका छन् ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धता कम कार्यान्वयन हुने गरेको सेवाग्राहीको जवाफ छ । त्यस्तै २५ प्रतिशतले ठीकै मात्र कार्यान्वयन हुने गरेको बताएका छन् । कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीलाई सोध्दा ३५ प्रतिशतले अन्य काममा पनि आएको बताएका छन् भने ६५ प्रतिशतले कार्यालयकै काममा मात्र आएको बताएका छन् ।
तपाइँप्रति सेवाप्रदायक कर्मचारीले कस्तो व्यवहार गरे ? भन्ने विषयमा २० प्रतिशतले पूर्ण रहेको बताएका छन भने ठीकैमा ७५ र पाँच प्रतिशतले अभद्र÷अमर्यादित व्यवहार गरेको जनाएका छन् । तपाइँले राख्नु भएका समस्यालाई के—कस्तो समाधान दिए ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा अति सजिलो तरिकाबाट समाधान दिएमा दस र ठीकैमा ८५ प्रतिशतले मत दिएका छन् ।
कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थित गरिनुपर्ने, अन्तरशाखा समन्वय राम्रो गर्नुपर्ने, योजनाहरुको प्राविधिक परीक्षण समयमा नै हुनुपर्ने, वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने प्रवृत्ति कम गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीको जिज्ञासा झन्झट नमानी सम्पन्न गर्नुपर्ने सेवाग्राहीको सुझाव रहेको छ ।
त्यस्तै, कार्यालय समयभर कर्मचारी कार्यालयमै रहनुपर्ने, हरेक गाविसमा मासिक अनुगमन गर्नुपर्ने, एकै पटकमा गुनासोको सुनुवाई हुनुपर्ने, योजना सम्झौता र अनुगमन समयमा नै हुनुपर्ने, कम्प्युटर र मोबाइलमा भन्दा सेवाग्राहीमा ध्यान दिनुपर्ने, एक कर्मचारीको अनुपस्थितिमा अर्को कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने, फाँटमा सम्बन्धित कर्मचारी भए नभएको बारे कार्यालय प्रमुखले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने सेवाग्राहीको सुझाव रहेको थियो ।
बाघ, गैँडा संरक्षण पाठशाला
काठमाडौँ, १० माघ । चौंथो संस्करणको प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेटमा लुम्बिनी प्रदेशले जितका लागि ६३ रनको लक्ष्य पाएको...